Kunoma yiliphi i-toothpaste elithengwe esitolo, kunezinto ezintathu ezinobuthi eziyingozi kakhulu: ama-parabens, i-sodium larium sulfate ne-triclosan. Uma ungakaze ufunde ilebuli yamazinyo, bese uthatha inkathazo ukuze uqiniseke ukuthi iyingozi futhi inobuthi. Ochwepheshe baye bavame ngokuphindaphindiwe ukuthi i-fluoride iyingozi kakhulu, kodwa abakhiqizi bezinambuzane bayayinaki. Ama-toothpastes wemvelo awusizo kakhulu amazinyo, ayawachitha, awenze ahlanze futhi aqede iphunga elimnandi. Ngakho-ke kungani uxubha amazinyo akho ngama-toxic? Inkinga enkulu ukuthi awusoze wazi ukuthi udla kangakanani ukhemikhali nazo zonke izinyosi zokuxubha izinyo.
I-Triclosan inobungozi kakhulu empilweni, kodwa yengezwe ezintsheni zokuzinyozela, ngoba inezakhiwo zokulwa ne-antibacterial.
I-SLS - inobungozi kakhulu emazinyo, futhi igalelo ekubunjweni kwe-acne esiyingxenyeni. Yisebenzise kuma-pastes nama-shampoos ukuze udale i-foam. Uma unqotshwa ama-pimples ku-chinyane, qalisa ukuxubha amazinyo akho ngokunamathisela okungokwemvelo futhi uzobona ukuthi aqala ukunyamalala.
Ngakho, ngaphansi kwakho uzobona ezinye izindlela zokupheka kwamazinyo ewusizo, ongayenza wena.
№1. Uzodinga izipuni ezimbili ze-soda (ukudla), i-pinch ye-sinamoni, i-pinni ye-fennel powder, njengolwandle oluningi usawoti, amaconsi angu-6 we-oyi tree tree noma i-mint kanye nesithako sokugcina yisipuni esisodwa samafutha kakhukhunathi.
Kulesi sifo semithi yokugcoba, asikho izigcwalisi zamakhemikhali, akukho izinto ezilimazayo. Kuyoba mnandi ukusebenzisa, ngoba kuyamnandi. Futhi uma uthanda futhi ufuna ukuwashayela njalo ngamazinyo akho, kungcono ukufaka i-soda ekubunjweni izikhathi ezimbalwa ngesonto, isikhathi sonke sokusihlanza. I-soda eningi kakhulu imbi futhi. Hlanganisa konke, ngaphandle kwamafutha kakhukhunathi, kufanele wanezelwa ngaphambi kokuhlanza. Londoloza lokhu okunamathiselwe kwesikhwama esikhishwe uphawu.
№2. Thatha i-spoonful ye-soda, i-1/4 spoon yomhlabathi usawoti, i-1 drop of clove, i-mint, i-orange noma i-sinamoni i-ester yamafutha. Hlanganisa konke enkomeni bese wengeza amaconsi ambalwa amanzi. Manje ungakwazi ukuxubha amazinyo akho ngendlela evamile.
Lena inguqulo yesabelomali yezinyosi zokugcoba, okususa kahle i-plaque, igcoba amazinyo kancane futhi isuse iphunga elimnandi.
№3. Izicelo eziyishumi uzodinga izipuni ezimbili (ukudla), i-spoonful of salt soil otholile ngokucophelela, i-spoonful ye-myrhh powder (ingasuswa esikhundleni se-bamboo powder noma i-licorice), ubumba obumhlophe obuningi, izipuni ezimbili ze-glycerin, amaqabunga ama-3-4 we-mint, amaconsi angu-10-12 kwanoma iyiphi i-ethereal amafutha (i-rosemary, ilamula, i-orange noma i-sweetmeat - konke kuxhomeke kokuthandayo).
Hlanganisa yonke into emasimini, ubeke esitokisini, shayela amazinyo ngendlela yakho evamile.
Amafutha abalulekile, okunconywa ukuthi asetshenziswe ekulungiseleleni imihlambi yamazinyo ekhaya:
Sage - ewusizo ngezinsini eziphaphayo kanye ne-parodontitis.
I-Rosemary - ithuthukisa ukujikeleza kwegazi.
I-Thyme - ibulala amabhaktheriya.
Umuthi we-tea - kuhle ukusebenzisa i-oda ne-gum disease.
I-Peppermint - isusa ukuvuvukala nobuhlungu bomlawuli we-oda, inika ukuphefumula kokuphefumula.
Amazinyo kuphela aphuca, ungawageza nge-brine, lokhu kwenziwa ngamaGreki, futhi siyazi ukuthi banezinyosi ezimhlophe. I-asidi ye-citric ikusiza ekukhanyeni. Ngemva kokugcoba ihora, awukwazi ukuhlanza nokukhipha amazinyo akho. Umphumela omuhle ungafinyelelwa uma ngemuva kokudla i-clove encane noma uhlanza umlomo wakho nge-decoction yegxolo le-oki noma i-thyme.
Rainbow swan eyenziwe ephepheni
Bag ye jeans endala ngezandla zakho nge iphethini
Indlela yokwenza i-bear Teddy
Indlela yokugqoka ama-baubles nesithombe
Sandwich nge tofu futhi bell pepper
Izinkolelo-ze zabesifazane abakhulelwe
Usombusazwe ophumelelayo uSergei Tigipko
I-Rigatoni ene-spicy sauce inyama
Amaphutha ajwayelekile ekutholeni umsebenzi
Kissel kusuka okusajingijolo
I-Salad yezithelo ku-Ananas
Umkhwenyana kaNicita Presnyakova wagubha usuku lokuzalwa kwakhe lwama-19 esikhwameni se-karaoke
I-Raspberry Cake Recipe
Yenza ukwakha izingubo ezimnyama
I-Pink lichen ezinganeni
Ice cream nge ugqumugqumu
Indlela yokwakha ubudlelwane nomyeni wakhe emkhawulweni wehlukaniso - Lezi zeluleko zengqondo zizokunika umndeni injabulo